सिरहाको शिक्षामा भक्तबहादुर राई | मझेरी डट कम
editor — Sat, 12/01/2018 - 05:53
त्यहाँ उनले हुनसम्मको दुःख पाए । त्यसबेला विद्यालय र छात्रावास दुवैको शुल्क तिर्नु पर्थ्यो । सधैँ घरैबाट खर्च धान्न सक्ने अवस्था थिएन । गाउँघरतिर पढाइ–लेखाइलाई अनुत्पादक काम ठानी निरुत्साहित गर्ने काम मात्र हुन्थ्यो । खर्च सकिएर टाट पल्टेको समयमा उनले पढाइलाई बिट मार्ने विचार पनि गरेका थिए तर मामा लक्ष्मणले तत्कालीन गर्जो टारिदिए र डटेर अध्ययनमा जुट्न खबरदारी गरिरहे ।
विद्यार्थीहरूलाई होस्सहितका जोसिलो हुन प्रेरित गर्दै भन्थे– नानीबाबु हो ! म तिमीहरूकै साथमा हुन्छु, टाढा हुन्न । तिमीहरू अरूको खुशी लेख्ने पेन्सिल बन्न नसकौला तर दुःख मेट्ने इरेजर अवश्य बन्न सक्छौ । मान्छेले जीवनमा अनेकौँ समस्या पनि भोग्नुपर्छ, त्यसलाई छिचोल्दा सफलता प्राप्त हुन्छ, सफलताले आनन्दै आनन्द अनुभूत गराउँछ । यसका लागि एउटै लक्ष्य, त्यसकै ज्ञान, त्यसमै मेहनत र त्यही प्राप्त गर्न दृढ सङ्कल्पित रह्यौ भने कहिल्यै असफल हुनुपर्दैन ।
बदला लिएर हैन आफूलाई बदलेर समस्याको समाधान हुन्छ । झैंझगडाले सम्बन्ध टुटाउनुको साटो सम्बन्ध बढाएर झगडालुलाई जुटाउनु ठूलो कुरा हो । आफूसँगकै वस्तुमा सन्तोष गर्ने नै सबैभन्दा धनी हुन्छ । अरूको कमजोरीलाई हँसीमजाकमा बदल्नुहुन्न किनभने सबैसँग कमजोरिरहन्छ र अरूसँग पनि हँसिमजाक गर्ने सामर्थ्य हुन्छ । जीवन प्रतियोगिता नभई यात्रा हो, यसलाई आफ्नै लय र सूरमा हिँड्न दिनुपर्छ । नकारात्मक विचारले सकारात्मक जीवन जिउनै सकिन्न, अतः तुरुन्तै नकारलाई सकारमा परिणत गर्नु आवश्यक छ । क्रोधले क्रोध काबुमा आउँदैन विपत्ति मात्रै आउँछ ।
हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ चार नजर दुई भा'को
लट्ठई पार्यो साँच्चै तिम्रो आँखा कर्काइले
यस्तो मिठो कुन रोग सारिदियौ तिमीले
मेरो मन्की रानी हौ
मेरो बेहालमा रमाऊ तिमी नै
मरेको म रात तिमी नरुनु
दौरा सुरुवाल लाईन्छ के नै बिग्रेला र !
जीवन - नायिका
के नै थियो हिँजो मन पराउनु किन